Ɔkwan a wɔfa so kyerɛ Bible ase fi Hebri, ne Greek mu | NWT
Ɔkwan a Wɔfa So Kyerɛ Bible Ase
Kasa a wodii kan de kyerɛw Bible no ne tete Hebri, Aram, ne Greek kasa. Seesei wɔakyerɛ Bible mu no nyinaa anaa ne fa bi ase kɔ kasa bɛboro 3,000 mu. Nnipa a wɔkenkan Bible no, wɔn mu dodow no ara nte kasa a wodii kan de kyerɛw Bible no, enti nea wɔakyerɛ ase kɔ kasa foforo mu na wɔkenkan. Sɛ obi rekyerɛ Bible ase akɔ kasa foforo mu a, ɔkwan bɛn na ɛsɛ sɛ ɔfa so? Wɔn a wɔkyerɛɛ Kyerɛw Kronkron—Wiase Foforo Nkyerɛase no ase no, dɛn na wɔyɛe a ɛkyerɛ sɛ wɔfaa saa kwan no so?
Ebia ebinom bɛka sɛ, sɛ obi rekyerɛ Bible ase a, nea ɛbɛyɛ a ɛbɛbɛn nea ɛwɔ tete kasa no mu no, ehia sɛ ɔkyerɛ ase traa, kyerɛ sɛ, ɔfa asɛmfua biara a, na ɔde ne nkyerɛase ato hɔ pɛpɛɛpɛ. Nanso ɛnyɛ bere nyinaa na obi kyerɛ ase saa a ɛbɛyɛ yiye. Yɛnhwɛ nea enti a yɛreka saa.
Kasa biara ne sɛnea ɛte. Ebiara ne ɛho mmara, nsɛmfua a ɛwom, ne sɛnea wɔka no. Hebri kasa ho ɔbenfo S. R. Driver kae sɛ, “ɛsono kasa biara kasa mmara ne nsɛmfua no abɔse, na saa ara nso . . . na ɛsono ɔkwan a wɔfa so hyehyɛ nsɛm no.” Ɛsono sɛnea nnipa a wɔka kasa biara dwen nsɛm ho. Enti Ɔbenfo Driver toaa n’asɛm no so sɛ, “sɛnea wɔhyehyɛ kasa biara mu nsɛm no yɛ soronko.”
Kasa a ɛnnɛ nkurɔfo ka no, wohwɛ nsɛmfua a ɛwom ne ne kasa mmara a, emu biara nni hɔ a ɛne Hebri, Aram, ne Greek kasa a wɔde kyerɛw Bible no yɛ pɛ. Enti sɛ wɔkyerɛ Bible ase traa a, ebetumi ama ayɛ den sɛ obi kan a ɔbɛte ase, na ebetumi mpo ama ntease no asesa.
Asɛmfua bi wɔ hɔ a ɛkyerɛ nneɛma bebree, enti sɛ wode asɛmfua koro no ara hyɛ baabi foforo a, ebetumi akyerɛ biribi foforo.
Bible mu nsɛm bi wɔ hɔ a, sɛ obi rekyerɛ ase a, obetumi ahwɛ kasa a wodii kan de kyerɛwee no so aka no tee ama ɛne no akɔ, nanso ɔreyɛ saa a, ɛsɛ sɛ ɔtɔ ne bo ase hwɛ no yiye paa.
Sɛ obi kyerɛ Bible mu asɛm bi ase traa a, ebetumi ama ntease no asesa. Eyi ho nhwɛso na edidi so yi:
Sɛ Kyerɛwnsɛm no ka “nna” ho asɛm a, ɛtɔ da a ɛfa obi a wada ho, na ɛtɔ da nso a, ɛfa obi a wawu ho. (Mateo 28:13; Asomafo Nnwuma 7:60) Sɛ owu ho asɛm na ɛreka a, wɔn a wɔkyerɛ Bible ase no tumi kyerɛ ase sɛ ‘wawu’ anaa ‘wada wɔ owu mu.’ Ɛno boa ma sɛ obi rekenkan saa asɛm no nnɛ a, otumi te ase yiye.—1 Korintofo 7:39; 15:51; 1 Tesalonikafo 4:13; 2 Petro 3:4.
Ɔsomafo Paul kaa asɛm bi wɔ Efesofo 4:14. Obi rekyerɛ saa asɛm no ase a, obetumi aka no tee sɛ “nnipa ludu aba a wɔtow.” Saa tete kasakoa yi fa sɛnea na nkurɔfo de ludu aba sisi wɔn yɔnko ho. Kasa bebree wɔ hɔ a, wokyerɛ ase saa a, ntease nnim. Nanso sɛ obi kyerɛ ase sɛ ‘nnipa nnaadaa’ a, ɛma ntease ba mu.
Wohwɛ Romafo 12:11 a, Greek asɛm bi wɔ hɔ a sɛ wokyerɛ ase tee a, ɛkyerɛ “momma honhom no nhuru.” Nanso ɛma ntease no yera wɔ Twi kasa mu. Enti yɛakyerɛ ase wɔ Bible yi mu sɛ, “monyɛ hyew honhom mu.”
Ne nkyerɛase tee wɔ Twi kasa mu: “honhom mu ahiafo”
Nea ɛkyerɛ: “wɔn a wohu sɛ wohia Onyankopɔn akwankyerɛ”
Yesu Bepɔw So Asɛnka a agye din no mu no, ɔkaa asɛm bi a nkurɔfo taa kyerɛ ase “Nhyira ne honhom mu ahiafo.” (Mateo 5:3, Akuapem Twi Bible a The Bible Society of Ghana Yɛe) Nanso sɛ wokyerɛ ase tee saa a, emu nna hɔ, na ɛma ntease a ɛwom no yera. Wohwɛ Yesu asɛm no a, ɛnyɛ ohia ho asɛm na na ɔreka. Mmom na ɔrekyerɛ sɛ, sɛ obi yere ne ho hwehwɛ honam fam nneɛma a ohia a, ɛnyɛ ɛno na ɛbɛma n’ani agye. Nea ɛbɛma obi ani agye ne sɛ obehu sɛ ohia Onyankopɔn akwankyerɛ. (Luka 6:20) Enti nea ɛbɛyɛ a ntease a wɔde kyerɛw saa asɛm no bɛba yiye no, ebinom kyerɛ ase “anigye ne wɔn a wohu sɛ wohia Onyankopɔn akwankyerɛ” anaa “wɔn a wonim sɛ wohia Onyankopɔn.”—Mateo 5:3; The New Testament in Modern English.
Hebri asɛmfua a wɔkyerɛ ase “ninkuntwe” anaa ‘anibere’ wɔ Twi kasa mu no, ebetumi akyerɛ abufuw a obi fa bere a obi a ɔbɛn no paa ayi no ama, na ebetumi nso akyerɛ sɛ obi ani bere ne yɔnko nneɛma. (Mmebusɛm 6:34; Yesaia 11:13) Nanso Hebri asɛmfua koro no ara, wotumi de di dwuma bere a wɔreka suban pa ho asɛm. Yɛbɛyɛ nhwɛso a, wotumi de saa asɛmfua no kyerɛ “ahokeka” a Yehowa de bɔ ne nkurɔfo ho ban, na etumi nso kyerɛ sɛ Yehowa yɛ obi a “ɔmpɛ sɛ wɔsom obiara ka ne ho.” (Exodus 34:14; 2 Ahene 19:31; Hesekiel 5:13; Sakaria 8:2) Ebetumi nso akyerɛ “mmɔdenbɔ” a Onyankopɔn asomfo anokwafo de taa n’akyi anaa wɔde som no. Etumi nso kyerɛ sɛnea ‘wɔnsosɔ bɔne a nkurɔfo yɛ tia Onyankopɔn no so koraa.’—Dwom 69:9; 119:139; Numeri 25:11.
Hebri asɛmfua yadh no, wɔtaa kyerɛ ase “nsa,” nanso etumi kyerɛ nneɛma pii. Baabi wɔ hɔ a, ɛkyerɛ “tumi,” ɛnna baabi nso ɛkyerɛ ‘ayamye’
Hebri asɛmfua a wɔtaa de gyina hɔ ma onipa nsa no, etumi kyerɛ nneɛma pii. Baabi wɔ hɔ a, ɛkyerɛ “tumi,” ɛnna baabi nso ɛkyerɛ ‘ayamye.’ (2 Samuel 8:3; 1 Ahene 10:13; Exodus 14:31) Wohwɛ Kyerɛw Kronkron—Wiase Foforo Nkyerɛase a ɛwɔ Twi kasa mu no a, saa asɛmfua no, yɛakyerɛ ase wɔ akwan bebree so.
Yɛhwɛ nea yɛaka yi a, yehu sɛ, sɛ obi rekyerɛ Bible ase a, ɛnyɛ ɛno ara ne sɛ ɔde asɛmfua koro no ara bɛkyerɛ asɛmfua pɔtee bi ase wɔ baabiara a obehyia saa asɛmfua no. Sɛ obi rekyerɛ Bible mu asɛm bi ase a, ɛsɛ sɛ ɔtɔ ne bo ase hwɛ sɛ nsɛmfua a ɔde rekyerɛ ase no kura ntease a wɔde kyerɛw saa asɛm no pɛpɛɛpɛ anaa. Afei nso, kasa a ɔrekyerɛ ase akɔ mu no, ehia sɛ ɔhwɛ sɛ ɔredi ɛho mmara so pɛpɛɛpɛ, na obi rekenkan a wammrɛ.
Nea yɛreka yi nso nkyerɛ sɛ obetumi akyerɛ ase sɛnea ɔpɛ biara. Sɛ obi rekyerɛ Bible ase na sɛ ɔde ɔno ara n’adwene ka nsɛm no sɛnea ɔpɛ a, ebetumi ama ntease paa a ɛwom no asesa. Adɛn ntia? Efisɛ asɛm a ɔrekyerɛ ase no, sɛ wante ase yiye a, anhwɛ a ɔde n’ankasa ntease bɛhyehyɛ mu anaa obeyiyi nsɛm bi a ɛho hia afi mu. Ɛwom, obi rekyerɛ Bible mu asɛm bi ase na ɔyɛ sɛ ɔbɛka asɛm no wɔ ɔkwan foforo so ama emu ada hɔ a, ebetumi ama ne kan ayɛ mmerɛw. Nanso sɛ wanhwɛ no yiye a, ebetumi ama ntease paa a ɛwom no ayera.
Sɛ obi rekyerɛ Bible ase na sɛ wanhwɛ yiye a, gyidi a okura betumi awurawura mu. Yɛmfa Mateo 7:13 nyɛ eyi ho nhwɛso. Ɛhɔ ka sɛ: “Ɔkwan a ɛtrɛw no kɔ ɔsɛe mu.” Wɔn a wɔkyerɛ Bible ase no binom wɔ hɔ a, ɛbɛyɛ sɛ nea wogye di nti, wɔkaa no sɛ ɔkwan no kɔ “hell.” Nanso Greek asɛmfua a ɛwɔ hɔ no, nea ɛkyerɛ paa ne “ɔsɛe mu.”
Sɛ obi rekyerɛ Bible ase a, ade foforo a ɛsɛ sɛ ɔma ɛtena n’adwenem ne sɛ, bere a wɔrekyerɛw Bible no, wɔde kasa a ɛda fam a nnipa bi te sɛ akuafo, nguanhwɛfo, ne mpataayifo nyinaa te ase na ɛkyerɛwee. (Nehemia 8:8, 12; Asomafo Nnwuma 4:13) Enti Bible a wɔakyerɛ ase yiye no, ɛno ne nea obi a ɔrepɛ biribi ahu kan a, otumi te ase, ɛmfa ho nipa ko a ɔyɛ. Sɛ obi rekyerɛ Bible ase a, ne papa mu no, ɛnsɛ sɛ ɔde nsɛm a ɛyɛ den sɛ nkurɔfo bɛte ase yɛ adwuma. Mmom nsɛmfua a emu da hɔ a ɛda nkurɔfo ano na ɛsɛ sɛ ɔde yɛ adwuma.
Wɔn a wɔkyerɛ Bible ase nnɛ no, wɔn mu pii ayɛ biribi a enni nnyinaso koraa. Wɔde wɔn pɛ ayiyi Onyankopɔn din Yehowa no afi wɔn Bible no mu. Nanso wohwɛ tete Bible nsaano nkyerɛwee ahorow mu a, wubehu edin no wom. (Hwɛ Nkekaho A4.) Wɔn a wɔkyerɛ Bible ase no pii de abodin bi te sɛ “Awurade” asi edin no ananmu, na ebinom mpo ama ayɛ sɛ nea Onyankopɔn nni din. Ɛho nhwɛso ne sɛ, wohwɛ Bible nkyerɛase bi mu a, Yesu mpaebɔ a ɛwɔ Yohane 17:26 no, wɔakyerɛ ase sɛ: “Mama wɔahu wo.” Yohane 17:6 nso wɔakyerɛ ase sɛ: “Nnipa a wuyii wɔn fii wiase maa me no, mama wɔahu wo.” Nanso nkyerɛase a ɛne asɛm a Yesu kae no hyia paa ne sɛ, “Mama wɔahu wo din,” ne afei, “Nnipa a wuyii wɔn fii wiase maa me no, mama wɔahu wo din.”
Wiase Foforo Nkyerɛase a wodii kan yɛe wɔ Borɔfo kasa mu no, wɔkae wɔ nnianim nsɛm no mu sɛ: “Yɛammɔ Kyerɛwnsɛm no mua. Yɛayɛ nea yebetumi biara sɛ, sɛ adwene a ɛwom no renyera nko ara de a, baabiara a ɛbɛyɛ yiye no, yɛbɛkyerɛ ase tee akɔ Borɔfo kasa a nkurɔfo ka no seesei no mu.” Wiase Foforo Bible Nkyerɛase Kuw no abɔ mmɔden akyerɛ Bible no ase ama abɛn tete kasa a wɔde kyerɛwee no. Nanso wɔrekyerɛ ase no, wɔhwɛe sɛ wɔremfa nsɛm a ɛntɔ asom nni dwuma anaa wɔrenka nsɛm no wɔ ɔkwan bi so a ɛbɛma ntease no ayera. Enti sɛ obi rekenkan Bible yi a, ɔremmrɛ koraa, na obetumi anya awerɛhyem paa sɛ, nsɛm a Onyankopɔn nam ne honhom so ma wɔkyerɛwee no, wɔakyerɛ ase pɛpɛɛpɛ.—1 Tesalonikafo 2:13.
Bible a wɔakyerɛ ase yiye no:
Ɛsɛ sɛ ɛtew Onyankopɔn din ho, enti baabiara a edin no pue wɔ Kyerɛwnsɛm no mu no, wɔde hyɛ hɔ.—Mateo 6:9.
Nsɛm a Onyankopɔn nam ne honhom so ma wɔkyerɛwee no, ɛsɛ sɛ ɛne no hyia.—2 Timoteo 3:16.
Sɛ kasa no mmara ma ho kwan a, ɛsɛ sɛ wɔkyerɛ ase tee ma ɛne kasa a wodii kan de kyerɛw Bible no hyia.
Sɛ wɔkyerɛ nsɛm bi ase tee na sɛ ɛbɛma ntease no ayera a, ɛnde ɛsɛ sɛ wɔka no ɔkwan foforo so ma ntease no ba yiye.
Nsɛm a wɔde kyerɛ ase no, ɛsɛ sɛ ɛyɛ nea ɛda fam a obiara te ase, na ama nkurɔfo ani agye ne kan ho.—Nehemia 8:8, 12.
Share Share Ɔkwan a Wɔfa So Kyerɛ Bible Ase
nwt kr. 1847-1850